Home » Creative Writing » အရက်​သမား ပို့စ်​ -၁
​ခေတ်​​တွေက ​ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီ။ အမျိုးသမီး​တွေ​တောင်​ လူမြင်​ကွင်းမှာ ​ပေါ်​ပေါ်ထင်​ထင်​ ဘီယာဘူး ကိုင်​ရဲတဲ့ အချိန်​မှာ အရက်​အ​ကြောင်း မ​ကောင်း​ပြောပါက အဆဲ​တောင်းသလိုဖြစ်​​တော့မယ်​ ။ ဆို​တော့ကာ အရက်​အ​ကြောင်း အ​ကောင်းအဆိုး သိခဲ့သ​လောက်​ ကြုံ​တွေ့ခဲ့ရသ​လောက်​က​တော့ဖြင့်​ ဒီလိုပါဗျာ ဆိုပြီး ကိုယ့်​ဂုဏ်​ ကိုယ်​​ဖော်​ မသူ​တော်​အလုပ်​ ၀င်​လုပ်​ရ​တော့မယ်​ ။ နို့မို့ဆို သိ​နေရက်​နဲ့ ကြိုမ​ပြောရ​ကောင်းလား လို့​တော့ အ​ပြောမခံနိုင်​​ချေဘူး ။
​ ​နေ၀န်းနီ က အရက်​နဲ့ ဘ၀ခါးဆက်​ပြတ်​ခဲ့ရသူ ။ အနီးပါတ်​၀န်းကျင်​မှာ သိတဲ့သူ​တွေက ဇိုး စာရင်း အသွင်းခံထားရသူ ။ ကျင်​လည်​ခဲ့သ​လောက်​ ကျင်​လည်​နိုင်​တဲ့ အရက်​​လောက ထဲမှာ အနိုင်​နဲ့ပိုင်းထားသူလို့ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် ယူဆထားသူ( ကျင်​လည်​နိုင်​တဲ့ အရက်​​လောက ဆိုတာ ကိုယ့်​ဝင်​​ငွေ​လေးနဲ့ ​သောက်​နိုင်​တဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​ကို​ပြောတာ ။) ပတ်​၀န်းကျင်​ကလည်း အ​ခြေခံလူတန်းစားပဲရှိ​လေ​တော့ များ​သောအားဖြင့်​​သောက်​နိုင်​တယ်​ဆိုတာက ပြည်​တွင်းဖြစ်​ အရက်​ဖြူ -( ခု​တော့ အရက်​ဆီ ​ပေါ့​လေ )- နဲ့ ထန်းညက်​က ချက်​တဲ့ ​ဒေသန္တာရအရက်​ (​တောအရက်​ ) ဖြစ်​​လေ​တော ဘီအီဒီစီ +​တောအရက်​ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ဘီ​တော အရက်​အ​ကြောင်းပဲ​ပြောနိုင်​မှာ ။ နိုင်​ငံခြားကလာတဲ့ အရက်​အ​ကြောင်း​တော့ နိုင်​ငံ​တော်​ကလည်း တရားဝင်​ တင်​သွင်းခွင့်​မပြုထား​လေ​တော့ ပြည်​တွင်းဖြစ်​ ​ဈေး​ပေါ​ပေါ ပဲပဲ အရက်​သမား​တွေအ​ကြောင်း​ပြောပါ့မယ်​ ။
​နေ၀န်းနီ အရက်​​သောက်​တတ်​ကာစက ၁၉၈၆/၈၇ ​လောက်​ ။ မန္တ​လေးတက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသားဘ၀ ( ဒီအ​ကြောင်းနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ အ​သေးစိတ်​က​တော့ ​နေ၀န်းနီရဲ့ မဆုံးတဲ့ သီချင်း ပို့စ်​အတွဲကိုရှု့ ) အရက်​ဖြူက တစ်​လုံး ခုနှစ်​ကျပ်​နဲ့ ပြားနှစ်​ဆယ်​ ။ မယုံမရှိနဲ့ ။ အစိုးရက တရားဝင်​ ဆိုင်​ဖွင့်​ပြီး​ရောင်း​ပေးတာ ။ အဲ့ဒိတုန်းက ​ဂေဇက်​တက်​​အော်​ဖစ်​ဆာ မှ ​လေးရာ့ငါးဆယ်​ – အစိတ်​ – ခုနှစ်​ရာ​ခေတ်​ ။ တက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသား တစ်​​ယောက်​ကို တစ်​လ သုံး​လေးရာ ကုန်​တာ ။ ဘုန်​ကြီး​ကျောင်းက​နေ တက်​ရင်​ တစ်​လ နှစ်​ရာ ။ လက်​ဖက်​ရည်​တစ်​ခွက်​မှတစ်​ကျပ်​ကိုး ။ ကုန်​​ဈေးနှုန်း​တွေခင်းကျင်း​နေတာ တစ်​ရက်​ ​နေ၀န်းနီ ဦ​လေး အရွယ်​ အကိုကြီးတစ်​​ယောက်​နဲ့ စကားစပ်​မိတာ​လေး​ပြောချင်​လို့
မြန်​မာပြည်​မှာ အရက်​က မအို​ဆေးတဲ့ ။ အရက်​​သောက်​စအရွယ်​က ဆယ့်​​လေးငါး​ခြောက်​နှစ်​ ။ အနှစ်​သုံးဆယ်​​လောက်​ ဆက်​တိုက်​​သောက်​ပြီးရင်​ ​လေးဆယ့်​နှစ်​ ​နဲ့ ​လေးဆယ့်​ရှစ်​ကြားဆို ဘ၀နိဂုံးချုပ်​ကုန်​ပြီ ။ ဆို​တော့ အို​အောင်​ကို မ​နေလိုက်​ကြရဖူး ။ ဘာ​ကြောင့်​ ဒီလိုဖြစ်​ကုန်​လဲ ။ အရက်​ရဲ့ အရည်​အ​သွေး​ကြောင့်​ ဆိုရင်​မမှားပါဘူး ။ ဘာ​ကြောင့်​အရည်​အ​သွေးကျရသလဲ ။ လူ​တွေရဲ့ ၀င်​​ငွေနဲ့ အရည်​အ​သွေးပြည့်​မှီတဲ့ အရက်​ကို လိုက်​မ​သောက်​နိုင်​လို့ ။ လူ​တွေရဲ့ ၀င်​​ငွေနဲ့ သူတို့တတ်​နိုင်​တဲ့ ​ငွေ​ကြေးပမာဏ ကိုကြည့်​ပြီး စီးပွား​ရေး တွက်​​ခြေကိုက်​​အောင်​ ထုတ်​လုပ်​လိုက်​တဲ့အတွက်​ အရက်​ရဲ့ အရည်​အ​သွေးဟာ တစ်​နှစ်​ထက်​တစ်​နှစ်​ ပိုပိုကျဆင်းလာတာ ။ တစ်​ဦးချင်းဝင်​​ငွေ က တိုးတက်​လာတဲ့ ကုန်​​ဈေးနှုန်းကို လိုက်​မမှီ​တော့ အရက်​တင်​မ​ဟုတ်​ဘူး ။ တစ်​ခြား စား​သောက်​ကုန်​ လူသုံးကုန်​ပစ္စည်း​တွေမှာပါ အရည်​အ​သွေး လိုက်​ပြီးကျဆင်းကုန်​တယ်​ ။ အဲ့ဒါနဲ့အတူ လူ​တွေရဲ့ အကျင့်​စာရိတ္တ သီလသမာဓိ စည်းကမ်း အပြုအမူ အ​ပြောအဆို အ​နေအထိုင်​​တွေပါ တစ်​နွယ်​ငင်​ တံစဉ်​ပါ ကျဆင်းကုန်​တာ ။ ​သေချာပြန်​ဆန်းစစ်​ကြည့်​ရင်​ ရင်​နာဖို့​တော်​​တော်​​ကောင်းပါရဲ့ ။ ( ဘယ့်​နဲ့​ ​နေ၀န်းနီရယ်​ အရက်​သ​မားအ​ကြောင်း ​ပြောမလို့ဟာ နိုင်​ငံ​ရေး​တွေပါကုန်​ပြီ ။ ကျ​နော်​တို့နိုင်​ငံက ဘယ်​က​နေစထွက်​ထွက်​ ဆ်ုက်​စရာက ဒီဘူတာပဲရှိတာ :))
​ ​အော်​ တစ်​ရက်​က အကိုကြီး တစ်​​ယောက်​နဲ့စကားစပ်​မိတာ​လေး​ပြောပြမလို့ ။ သူ​ပြောသွားတာက
အဲ့သလို စံနှုန်း​တွေယှဉ်​ပြီး နှိုင်းယှဉ်​ပြလိုက်​​တော့ အဓိက တရားခံက ဘွားဘွားကြီး​ပေါ်လာတာ ။
ဒါဖြင့်​ လူ​တွေဘာလို့ အရက်​​သောက်​ကြသလဲ ။ စလာပြီ ။ ဒီ​မေးခွန်းက ​တော်​​တော်​ ဂွကျတဲ့​မေးခွန်း ။ အများစု ​သောက်​​နေတာက ဘီအီး နဲ့​တော အရက်​ ။ နံလည်းနံ​သေး။ အရသာကလည်း ပူစပ်​ခါး ။ ထွက်​တဲ့ ​ချွေး ဆီး အစ အရက်​နံ့ကြီးက ​တော်​​တော်​ဆိုး ။ ဒါဖြင့်​ ဘာလို့ ​သောက်​​နေကြလဲ ။ တစ်​ချို့များ အားမနာ လျှာမကျိုး ​ခွေး​တောင်​ မ​သောက်​တဲ့ အရည်​တဲ့ ။ ဒါကြီးကို မက်​မက်​စက်​စက်​ လူတစ်​ကာ လက်​ညိုးထိုးခံ ​မေးအ​ငေါ့ ခံပြီး​သောက်​​နေကြတာ အ​ကြောင်း​တော့ ရှိရမယ်​ ။ ဘာပဲ​ပြော​ပြော စွဲတယ်​ဆိုမှ​တော့ ​ကောင်းတာရှိလို့ စွဲတာ​ပေါ့ ။ ​ကောင်းကွက်​မရှိရင်​ ဘယ်​သူက စွဲမလဲ​နော့ ။ ဟုတ်​ဖူးလား ။
*အပိုင်း -၂ ဆက်​လက်​ဖတ်​ရှု့ပါရန်​
အရက်ပြင်းပြင်းကြီးတွေ ငါးပက်စာလောက် သောက်မိရင်
အရက်က သူ့ ဂုဏ်သတ္တိ နဲ့ သူ နေတာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဘာမှမလုပ်ဘူးး
မသောက်ဘဲနဲ့ အပြစ်ပြောနေတဲ့သူတွေကိုကျ ဘယ်လိုပြောမလဲဟင်
အရက်ဆို အကောင်းစားပဲသောက်တယ်။ ဘီအီးလည်းမသောက်ဖူးဘူး ဇေလည်းမသောက်ဖူးဘူး။ ရွိုင်ရယ်ကလက်တို့ ဟိုက်ကလက်တို့လည်းမသောက်ဖူးဘူး။ ဘီယာတော့သောက်တယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မုယောစပါးနဲ့လေ။ ငိငိ ဒါပဲကောင်းတယ်။
2009 မှာ အဖေဆုံးတယ်.. အဖေမဆုံးခင်အထိ အရက်ဖြူဈေးက တစ်ပုလင်းကို ၃၀၀ တဲ့… အဖေက အမြဲပြောတယ်.. ငါက သူများတွေလို မိန်းမပွေ..လောင်းကစား လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့.. မိန်းမပွေတာတို့. ဖဲရိုက်တာတို့က ငွေအရမ်းကုန်တယ်.တဲ့.. ငါ့အရက်က တစ်ပုလင်းမှ ၃၀၀ ထဲရယ်တဲ့.. ငွေတော့ မကုန်ဘူး..အသက်တော့ ကုန်သွားတယ်..
အရက်အကောင်းစားလေးကို အချဉ်ဓါတ်ကဲတဲ့ အသီးစုံတစ်ပွဲရယ် ချိစ်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူလေးရယ်… ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် ဆီစိမ်လေးရယ် .တစ်ပက်စာလောက်လေးကိုရေခဲတုံးလေးသုံးတုံးလောက်နဲ့ ဆော်ဒါလေးနဲ့ရော … ဗီသိုဗင်ရဲ့ မွန်းလိုက်ဆိုနားတာလေးကို home theater လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် နားကြပ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နားထောင်….
.သောက်လိုက်ရင် “ချို” မြိုလိုက်ရင်”ခါး” ပြီးတော့ စိတ်ထဲ မယ် “ပျော်” သလိုဖြစ် နောက် “ဝမ်းနည်း” ဒါမှမဟုတ် “ဒေါသ” ဖြစ်ချင်လဲဖြစ် နောက်တော့ “ရီဝေဝေ” အဲဒီနောက်မှာ လောကကြီးကို “မေ့” ရော။
အရက်အကြောင်းလေးရေးထားတော့ ငယ်ငယ်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်သွာသတိရတယ်။ ယမကာလုလင်။စာရေးဆရာကလက်ဖျားတင်မေ့နေတယ်။ သတိရမှထပ်လာရေးမယ်။ သိတဲ့သူများမစပါ။ အဲစာအုပ်ကိုအရမ်းသဘောကျခဲ့တာ
ယမကာလုလင် – မင်းလူ
အဲ့စာအုပ်​ကို ယမကာ မိုနာလီဇာစမိုင်းလ်​ ​ခေါ်တယ်​
အရက်​မ​သောက်​ဖြစ်​တဲ့ရက်​က အရက်​​သောက်​ဖြစ်​တဲ့ရက်​ထက်​ အချိန်​ပိုရတာ​တော့အမှန်​ပဲ အဘနီ​ရေ
လောလောဆယ် အရက်မသောက်ဖြစ်တော့ပဲ ဘီယာဘက်လှည့်နေပါတယ်…။
ဟုတ်တာပေါ့ ဆြာနီရယ် ..